Britain Inoti Zanu PF Ngairemekedze Chirongwa cheKunyorwa kweBumbiro Idzva
Mumiriri weBritain muZimbabwe, Amai Deborah Bronnert, vanoti Zanu PF inofanirwa kuzvipira zvizere muchirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika kuburikidza nekutevera chibvumirano cheGlobal Political Agreement, GPA.
Amai Bronnert vakataura mashoko aya pavaishanya pachikoro chevanorarama nehurema cheKing George IV muBulawayo.
Mashoko Amai Bronnert anouya panguva iyo vamwe muZanu PF vari kukurudzira kuti bato iri ribude muhurongwa hwekunyorwa kwebumbiro idzva uhu, kuitira kuti kuitwe sarudzo pachishandiswa bumbiro riripo kare.
Vamwewo vakaita semumiriri weTsholotsho North muparamende, VaJonathan Moyo, vari kukurudzirawo kuti vari kunyora bumbiro iri vabviswe poiswa vamwe, vachivapomera mhosva yekunyora bumbiro rinokanganisa kuchengetedzeka kwenyika.
NeMuvhuro, vamwe vari kumirira Zanu PF mukunyorwa kwebumbiro idzva vanonzi vakabuda mumusangano weCopac senzira yekunyunyuta nezvavanoti zviri kuitika muchirongwa ichi.
Asi mumwe wemasachigaro eCopac vachimirira Zanu PF, VaMunyaradzi Paul Mangwana, vaudza Studio7 kuti bato ravo ndiro riri kutotungamira mukunyorwa kwebumbiro idzva iri.
VaMangwana varambawo mashoko ekuti pane vamwe vebato ravo vakabuda mumusangano weCopac, vachiti vose nechikwata chavo vatori kuVumba pabasa rekunyorwa kwebumbiro idzva iri.